Waxsansheeg News - Sannadka sanadka 2018: maareynta tamarta isku dhafan oo isku dhafan oo isku dhafan oo hoos yimaada internetka tamarta
Shabakadda Kaydinta Tamarta ee Polaris: Waxaa la dhihi karaa 2016 iyo 2017 waa “sanadaha fikirka” ee tamarta internetka. Waqtigaas, qof walba wuxuu wali kahadlayay "waa maxay internet tamarta", "maxaa uxeexaya tamar tamarta", iyo "muxuu kusocon karaa tamarta internet?" Fiiri ”. Si kastaba ha noqotee, sanadka 2018 wuxuu galay "degitaanka sanadka" ee internetka tamarta, qof walbana wuxuu si qoto dheer uga wada hadlayaa sida loo sameeyo. Maamulka Tamarta Qaranka iyo Wasaaradda Sayniska iyo Teknolojiyadda ayaa leh Mashaariic badan oo taageero ah iyo maalgashi fara badan oo maalgashi ah, sida dufcaddii ugu horreysay ee “Internet +” tamarta smart (Internetka tamarta) oo ay ku dhawaaqday Maamulka Tamarta Qaranka ee 2018.
Shabakadda Kaydinta Tamarta ee Polaris: Waxaa la dhihi karaa 2016 iyo 2017 waa “sanadaha fikirka” ee tamarta internetka. Waqtigaas, qof walba wuxuu wali kahadlayay "waa maxay internet tamarta", "maxaa uxeexaya tamar tamarta", iyo "muxuu kusocon karaa tamarta internet?" Fiiri ”. Si kastaba ha noqotee, sanadka 2018 wuxuu galay "degitaanka sanadka" ee internetka tamarta, qof walbana wuxuu si qoto dheer uga wada hadlayaa sida loo sameeyo. Maamulka Tamarta Qaranka iyo Wasaaradda Sayniska iyo Teknolojiyadda ayaa leh Mashaariic badan oo taageero iyo lacago fara badan oo maalgashi caasimada ah. Tusaale ahaan, dufcaddii ugu horreysay ee "Internet +" smart Tamarta (Internetka tamarta) mashaariicda mudaaharaadka ah ee ay ku dhawaaqday Maamulka Tamarta Qaranka ee 2018.
Waqti aan fogayn, Shirka Caalamiga ah ee Tamarta Caalamiga ah ee 2018 waxaa lagu qabtay magaalada Beijing. In ka badan 800 oo hoggaamiyeyaal warshadeed oo ka kala socda in kabadan 30 waddan iyo gobollada adduunka ayaa dhammaantood isugu yimid si ay diiradda u saaraan mawduuca "Tamarta Caalamiga ah ee Internetka-laga soo bilaabo Shiinaha ee Tallaabada Adduunka". Beddel fikradaha, wadaagga natiijooyinka, oo ka wada hadal qorshayaasha horumarinta tamarta ee adduunka.
Waxaa la dhihi karaa qof walba wuxuu si aad ah u sugayaa xaqiijinta isku xirnaanta tamarta, internet ka tamarta ayaa laga filayaa inuu isbedel cusub ku soo kordhiyo nolosha aadanaha. Shirka "lagu sameeyay Shiinaha 2025 Shirweynihii Madasha" dhammaadka 2017, Mr. Zhang Bin, oo ah kuxigeenka Hanergy Group, ayaa sidoo kale muujiyay fahamkiisa mustaqbalka internetka tamarta mustaqbalka "Wadahadalka Wadahadalka-Soo-Saarista Warshadaha: Wadahadalka Shiinaha iyo aduunka".
Horumarinta internetka tamarta ayaa sare u qaaday su'aalo badan oo cusub, fikrado cusub iyo teknolojiyad muhiim ah. Iyada oo si qoto dheer loo bilaabay baaritaanka, internet-ka tamarta gobolka ayaa qof walba soo jeediyay. Sida loo qeexo internet-ka tamarta gobolka: Haddii internetka tamarta loo tixgeliyo inay ku dhisan tahay fikirka internetka ee isku-xirka macluumaadka Tamarta “Shabakadda Deegaanka Wide” waxay u dhigmi kartaa tamarta gobolka sida “shabakadda aagga deegaanka”, ee loo yaqaan “shabakadda tamarta gobolka”, oo is weydaarsata macluumaadka iyo dejinta tamarta "Shabakada Wide Area" ee dibedda ah, waxay siisaa maarayn tamar iyo adeeg.
Shabakada Tamarta ee Degmada
Wadada korantada gobolka waa aasaaska falanqaynta nidaamka tamar badan iyo muujinta la taaban karo ee astaamaha nidaamyada tamarta badan. Marka laga eego aragtida shaqeysa, nidaam tamar badan leh ayaa si dabiici ah iskugu dari kara noocyo kala duwan oo tamar ah, isla markaana ku habeyn kara qeybinta iyadoo loo eegayo arrimo ay ka mid yihiin sicirka iyo saameynta deegaanka; Marka laga eego aragtida adeegyada tamarta, baahiyaha badan ee isticmaaleyaasha waxaa loo tixgeliyaa si tirakoob leh oo si caqligal ah loo kala diray Si loo gaaro ujeeddada garka-u-ruxidda iyo buuxinta dooxada, iyo isticmaalka tamarta macquulka ah; marka laga eego aragtida shabakadaha tamarta, iyada oo loo marayo falanqaynta iskaashiga ee shabakadaha korantada, shabakadaha gaaska dabiiciga ah, shabakadaha kuleylka, iyo shabakadaha kale, waxay kor u qaadaan horumarka teknoolojiyadda tamarta badan. Aaggu wuxuu u weynaan karaa sida magaalo, magaalo, beel, yar sida beero warshadeed, shirkad weyn, dhisme, kaas oo guud ahaan daboolaya nidaamyada tamarta isku dhafan sida korontada, bixinta gaaska, kuleylka, bixinta hydrogen, iyo gaadiid la xaqiijiyay, sida iyo sidoo kale xiriirinta xiriirka iyo aasaaska macluumaadka. Muuqaalka aasaasiga ah ee rugtu waa in ay lahaato isku xirka jiilka tamarta, gudbinta, beddelka, kaydinta, iyo isticmaalka. Shabakaddan gobolka ee is dhexgalka tamarta badan, sidayaasha macluumaadka waxaa ku jira “qulqulka korantada”, “qulqulka gaaska dabiiciga”, iyo “macluumaad”. Qulqulka ", qulqulka maaddada" iwm. Sababtoo ah xajmigeeda oo yar awgeed, shabakadda tamarta ee gobolka waxaa hogaamin kara oo dhisi kara oo fulin kara dowladda, shirkadaha tamarta iyo shirkadaha waaweyn ee warshadaha, waxayna leeyihiin qiimo la taaban karo. Shabakadda tamarta ee gobolka waa qeyb ka mid ah internetka tamarta, taas oo ku lug leh isku xirka tamar badan waxayna leedahay qaabab iyo astaamo kala duwan. Waxaa ku jira isku xirka awooda tamar-fududaanta iyo isku xirka awooda adag iyo xakamaynta adag ee xakameynta; Waxa kale oo ku jira tamar ay adag tahay in lagu keydiyo awoodda weyn, Waxa kale oo ku jira tamar ay fududahay in la kaydiyo laguna wareejiyo; Waxaa jira labadaba sahay isku dubbaridan oo ku saabsan dhammaadka jiilka tamarta iyo isuduwaha isku-dubbaridan dhammaadka isticmaalka tamarta.
Astaamaha ugu muhiimsan ee internet-ka tamarta gobolka
Marka la barbar dhigo internetka tamarta guud ee iskutallaabta, internet-ka tamarta gobolka wuxuu adeegsadaa noocyo kala duwan oo shirkado warshadeed iyo deganeyaal maxalli ah inay yihiin koox adeegsade ah. Adoo aruurinaya wax soo saarka tamarta, isticmaalka, faafinta, keydinta iyo macluumaadka kale ee macluumaadka, iyadoo la adeegsanayo falanqaynta xogta, isku dubaridka tamarta iyo kobcinta Qaabka jadwalka jadwalka wuxuu buuxiyo baahida culeyska ee isticmaaleyaasha domainka. Iyada oo laxiriirta tan, Internetka iskuxirka gobolka ee tamarta wuxuu ubaahanyahay isku xirka Internetka tamarta gobolada kaladuwan. Iyada oo la adeegsanayo baahinta awoodda ballaaran, wareejinta gaaska iyo nidaamyada kale ee laf-dhabarka, gudbinta tamarta masaafo dheer ee u dhexeysa gobollada ayaa lagu gaari karaa, iyadoo la xaqiijinayo amniga iyo xasilloonida Internetka tamarta ee gobol kasta oo ka mid ah aagga caymiska. Ku shaqee si aad u siiso tamar ku haynta bannaanka dibedda markii ay buux dhaafi karto internetka iyo nusqaamaha jira. Si loo waafajiyo sahayda tamarta iyo qaabka baahida ee gobollada maxalliga ah, iyada oo lagu saleynayo si buuxda u qaadashada khibradda wanaagsan ee hannaanka horumarinta internetka, Internetka tamarta gobolka ayaa sameeyay astaamo ka duwan kan internetka ee tamarta internetka.
Mid waa isugeyn howleedyo badan
Si loo haqabtiro baahida culus ee isticmaalka isticmaaley ee gobolka, tiro aad u badan oo ah tas-hiilaadka tamarta la qaybiyey ayaa la geeyay xaddiga internetka ee tamarta gobolka, oo daboolaya CCHP la qaybiyey, kuleylka isku-dhafka ah iyo awoodda CHP, dhalinta korantada sawirka, ururinta kuleylka qorraxda, hydrogen. Saldhigyada wax soo saarka, dhulka Noocyo kala duwan oo ay ka mid yihiin matoorrada kuleylka isha ayaa ah nidaam keenaya noocyo badan oo tamar ah sida aruurinta korantada, kuleylka, qaboojinta, iyo gaaska, kuwaas oo si wax ku ool ah u rumeysan kara isticmaalka tamarta. Isla mar ahaantaana, internet-ka tamarta gobolka wuxuu bixiyaa isku-dheellitir heer sare ah oo isugu jira isku-dheellitiran oo loogu talagalay noocyada kala duwan ee helitaanka tamarta la qaybiyey, laakiin tani waxay sidoo kale soo bandhigaysaa shuruudaha sare ee tayaynta iyo xakamaynta internetka tamarta. Sababtaas awgeed, qorshaynta isku-dubbaridka gaaska-korontada, tikniyoolajiyadda P2G, tikniyoolajiyadda V2G, iyo teknolojiyadda unugyada shidaalka, ee dhiirrigeliya is-dhexgalka tamarta badan, ayaa door muhiim ah ka ciyaari doona mustaqbalka.
Midda labaad waa is-dhexgal laba-dhinac ah
Internetka tamarta ee gobolka ayaa jabin doona hannaanka socodka tamarta isha-net-dutch ee hadda jira wuxuuna sameyn doonaa moodal bilaash ah, xawaare ku socda iyo is-xakamaynta nooc tamarta socodka tamarta badan leh. Raadiyeyaasha tamarta ee la qaybiyey waxay awood u siinayaan isku xirnaanta tamarta qeybo ka mid ah aagga. Rakibaadda saldhigyada tamarta ama xarumaha tamarta ayaa jabin doona caqabadaha warshadaha ee u dhexeeya shirkadaha kuleylka ah ee asalka ah, shirkadaha korontada iyo shirkadaha gaaska, iyo dadka deggan oo ku qalabaysan qalabka korantada qeybinta ayaa la filayaa inay ka qeybqaataan bixinta tamarta internetka tamarta iyo tamarta kale. bixiyeyaasha. Mustaqbalka, oo leh horumarin deg-deg ah ee warshadaha gawaarida korantada, isku-xirka gaadiidka leh gawaarida korantada ee caqliga leh maadaama jirka ugu weyn sidoo kale lagu dhex dari doono moodalka internetka tamarta ee jira.
Saddex waa madax-bannaan buuxda
Ka duwan qaabkii isticmaalka tamar-dhaqameedka, internetka tamarta gobolka ayaa si buuxda u isticmaasha ilaha tamarta kala duwan ee gobolka, waxay dhistaa nidaam ku habboon isku-filnaashaha gobolka, waxay si buuxda u qaadataa tamarta la qaybiyey ee gobolka, oo waxay ogaataa sida ugu habboon ee loo adeegsan karo kala duwan. xarumaha tamarta. Isla mar ahaantaana, qayb ka mid ah aasaasiga ah ee tamarta laf-dhabarta internetka, shabakadda tamarta gobolka iyo shabakadda tamarta laf-dhabarta ayaa leh qaab labalaab ah oo la xakameyn karo ee socodka tamarta, iyagoo gacan ka helaya shabakadda tamarta laf-dhabarka weyn iyo shabakadda tamarta ee kale ee gobolka ee internetka loogu talagalay laba isweydaarsiga tamarta iyo macluumaadka.
Iyada oo ku saleysan astaamaha kore, astaamaha ugu weyn ee internet-ka tamarta gobolka ayaa ah in la isticmaalo "Internet +" ka fikir si dib loogu dhigo baahiyaha shabakadda tamarta, si loo gaaro heer sare ee is dhexgalka tamarta iyo macluumaadka, iyo in la dhiirrigeliyo dhismaha shabakadda tamarta tamarta. kaabayaasha. Iyada oo la soo bandhigayo tikniyoolajiyadaha sida aaladaha ganacsiga ee khadka tooska ah iyo ka baaraandegida xogta weyn, Internetka Tamarta ayaa si buuxda u qarin doonta macluumaad aad u fara badan sida soosaarka tamarta, gudbinta, isticmaalka, beddelka, iyo keydinta, iyo hagida wax soo saarka tamarta iyo jadwalka tikniyoolajiyada macdanta sida. sida saadaalinta baahida tamarta iyo wax ka qabashada dhinaca.
Sida loo xaqiijiyo faa'iidooyinka fikradeed ee internetka tamarta gobolka, Professor Sun Hongbin oo ka tirsan Jaamacadda Tsinghua ayaa si habaysan u soo jeedisay: maareynta tamarta badan ee dhameystiran ee maareynta tamarta gobolka. Markii tifatiraha booqday Professor Sun oo ka tirsan Jaamacadda Tsinghua sanadkii 2015, wuxuu xusay cilmi baarista. Shirka Qaranka ee Tamarta Internetka ee Diseembar 2017, Professor Sun ayaa si rasmi ah u wadaagay oo ka wada hadlay natiijooyinka cilmi baarista.
Dhibaatada kontaroolada ugu habboon ee lagu raadinayo ugu badnaan faa'iidooyinka
Sida kor loogu qaado faa'iidooyinka hoos yimaada sahayda tamarta badbaadsan iyada oo loo marayo "isku-darka tamarta badan iyo isku-duwaha isku-xidhka shabakadda" waa arin diirada lagu saaray oo khubaradu aad uga walaacsan yihiin fulinta mashruuca tamarta internetka tamarta. Tani ma fududa in la gaaro. Marka laga eego dhinaca farsamada, dhibaatadan diiradda la saaray waxaa loo aanayn karaa xakamaynta ugu habboon ee shabakad qulqulka tamarta badan ee adag. Dhibaatadan xakameynta ugu fiicani waa in la raaco ugu badnaan faa'idada, faa iidada = kharashka-laga baxo, iyo in caqabadda heysata ay tahay tamar badbaado leh. Dakhliga halkan waxaa ku jira iibinta tamarta iyo adeegyada, kharashkana waxaa ku jira soo iibsashada tamarta iyo adeegyada. Hababka la hagaajiyey waxaa loo qaybiyaa qabow, kulul, gaas, koronto, biyo, gaadiid, isha, shabakad, lacag bixin, kaydinta iyo isku xirka kale. Caqabadaha waxaa ka mid ah isu-dheellitirka ka dhexeeya bixinta iyo baahida, kala duwanaanta jirka ee howlgalka, iyo badbaadada sahayda tamarta. Dhibaatadan diiradda la saaray ayaa ugu dambeyntii lagu gaadhay nidaam, kaas oo loo yaqaan Nidaamka Maareynta Tamarta Isku-Darka (IEMS).
IEMS waxaa loo tixgelin karaa inuu yahay nidaamka maaraynta tamarta jiilka afraad (Nidaamka Maareynta Tamarta, EMS). EMS waa nidaam go'aan qaadasho kumbuyuutar oo loogu talagalay falanqaynta khadka tooska ah, kobcinta iyo xakameynta ee lagu dabaqay xarunta xakamaynta korantada korantada. Waa xarunta dhexe ee dareemayaasha iyo kala dirista taliska dhexe ee hawlgalka korantada, waana udub dhexaadka xikmadda ee korantada weyn. Kooxda cilmi-baarista ee 'Sun Sun' waxay baranayeen EMS muddo ka badan 30 sano. Marka hore, aan dib u eegno taariikhda EMS.
Jiilkii ugu horreeyay ee EMS wuxuu soo muuqday kahor 1969 waxaana loo yaqaanay bilowga EMS. EMS-kan kaliya waxaa ku jira SCADA si loo helo koronto, laakiin kaliya aruurinta xogta. Ma jiro falanqaynta shabakadda waqtiga-dhabta ah, kobcinta, iyo xakamaynta iskaashiga. Falanqaynta shabakadda iyo tayaynta ayaa inta badan ku tiirsan xisaabinta qadka offline, waxayna ka tirsan tahay jadwalka taariikhiga ah. Maareynta hadda jira waa inaysan joogsan heerka jadwalka awoodda, laakiin waxay u baahan tahay maareyn jilicsan si loo wanaajiyo tartannada aasaasiga ah.
Jiilkii labaad ee EMS wuxuu soo ifbaxay horaantii 1970-meeyadii ilaa horraantii qarnigii 21-aad waxaana loo yiqiin EMS-dhaqameedka. Aasaasaha jiilkan EMS waa Dr. Dy-Liacco, oo soosaaray moodalka aasaasiga ah ee nidaamka xakameynta awooda awooda, hormarinta falanqaynta shabakada waqtiga-dhabta ah, kobcinta, iyo xakamaynta iskaashiga, sidaa darteed 1970-yadii, EMS si dhakhso leh ayey u horumarisay. dalkaygu wuxuu dhammaystiray soo-bandhigidda afarta awood ee waaweyn ee kala-diridda nidaamyada otomaatiga 1988, ka dibna dhammaystiray dheef-shiidka, nuugista, iyo dib-u-cusboonaysiinta si loo horumariyo EMS leh xuquuqaha hantida aqooneed ee madax-bannaan. Waqtigaas, Jaamacadda Tsinghua waxay qabatey soo-gelinta, dheef-shiidka iyo maqnaanshaha EMS ee Korantada Waqooyi-bari. Maaddaama Waqooyi-bari ay saldhig weyn ka ahayd warshadaha waqtigaas, isku-habeynta shabakadda Korantada Waqooyi-bari ayaa ahayd tii ugu weyneyd, culeyskii ugu weynaana wuxuu ka jirey Waqooyi-bari. Waqtiga xaadirka ah, EMS-ka gudaha ayaa asal ahaan deegaan ahaan lagu koobay. Jadwalka waqtigaan wuxuu horey u lahaa jadwalka baaritaanka falanqeynta wuxuuna sare ugu kacay heer cusub.
Jiilka seddexaad EMS waa koronto xariif ah oo EMS oo isku dubbarideysa isha iyo shabakadda. Waxay u muuqatay ka dib markii la sameeyay kobcinta tamar ballaaran oo dib loo cusbooneysiin karo. Waqtigaan, ma jirin iskaashi dhuuban oo tamar badan, kaliya iskaashiga shabakada isha. Marka la eego astaamaha aan la xakamayn karin iyo isbeddelka tamarta tamarta dib loo cusbooneysiin karo, ilo badan oo dabacsan ayaa loo baahan yahay, laga soo qaado-gaadiidka illaa lacag-bixinta. Waqtigaan, EMS waxay iskuxiran kartaa oo adeegsan kartaa ilo kala duwan oo la qaybiyey si loo horumariyo isuduwidda isudiyaarinta is-edbin qaab dhismeedka, laga soo bilaabo, shabakad ilaa Nederland, ayaa leh EMS. Waxaa jira EMS oo loogu talagalay beeraha dabaysha iyo dhirta awoodda korantada, EMS loogu talagalay gawaarida korantada, dhismayaasha iyo guryaha, iyo EMS oo loogu talagalay gudbinta korantada, qaybinta, iyo korantada. EMS-yadaani waa is-edbin marka hore, ka dibna waxay ku xiran yihiin shabakadaha isgaarsiinta si ay u sameeyaan iskaashi. Waqtigaas, waxaa lagu magacaabi karaa qoyska EMS. Waxa jira xubno badan oo ka tirsan qoyska EMS, iyo xubno kala duwan ayaa leh astaamo kaladuwan oo si wada jir ah looga dhabeeyo isha iyo iskaashiga shabakadda ee shabakadda caqliga leh.
Jiilka afraad ama jiilka xiga EMS waxaa loo yaqaan nidaamka tamarta isugeynta tamarta isku dhafan, taas oo ah, IEMS. Is dhexgalka halkan waa in la isku daro oo la isku daro illo tamar oo kala duwan. Iyada oo loo kala jabay ilaha tamarta kaladuwan iyo hufnaanta tamarta oo dhammaystiran, ayaa loo baahan yahay adeegsi dhammaystiran iyo kaabis; isla mar ahaantaana, ay ugu wacan tahay la'aanta daran ee ilaha dabacsanaanta, qaddarka badan ee dabaysha, biyaha iyo nalka, waxaa lagama maarmaan ah in la ballaariyo is dhexgalka tamarta kala duwan oo laga helo ilo kala duwan oo ilaha tamarta cusub oo dabacsan si loo taageero isticmaalka. tamar culus oo dib loo cusbooneysiin karo; iyada oo loo marayo kor u qaadis dhammaystiran iyo jadwalka faa iidada ugu badan, goobta lagu hubinayo badbaadada sahayda tamarta iyo tayada sare, hoos u dhigidda kharashaadka isticmaalka tamarta iyo hagaajinta hufnaanta dhaqaale ee adeegyada tamarta ee dhameystiran.
Waa sida maskaxda, oo ka hooseysa waa nidaam tamar dhameystiran, qabow, kuleyl, gaas, koronto, biyo, gaadiid, dhammaan noocyada tamarta qulqulka, oo loo yaqaan qulqulka tamarta badan. Shirka caalamiga ah ee tamarta la adeegsaday (ICAE) ee lagu qabtay Boqortooyada Midowday, nidaamka waxaa loo aqoonsaday inuusan ka aheyn mid adduunka ka horreeyay. Natiijadii ugu dambeysay ee la sii daayay sanadkii 2017 ee Jaamacadda Tsinghua, “Nidaamka Maareynta Awoodaha Tamarta Dheeraadka ah ee Beerta Nabadda” waa sheyga ugu horreeya adduunka ee IEMS. Aad ayey u adag tahay kooxda cilmi-baaristu inay ballaariyaan barta 'EMS' muddo 30 sano ah IEMS. Ka dib 5 sano oo cilmi baaris ah iyo horumarin, iyo sidoo kale ku saleysan 30 sano oo cilmi baaris EMS ah iyo khibrad horumarineed, IEMS si guul leh ayaa loo horumariyey.
Hawlaha ugu waaweyn ee IEMS
Qulqulka tamarta badan SCADA. Waxaa loo istcimaalay in lagu xaqiijiyo dhammaystiran iyo hawl qabad heer sare ah oo heer-sare ah-waqtiga-ururinta xogta waqtiga dhabta ah iyo shaqooyinka kormeerka. Waa aasaaska digniinta hore, kobcinta, iyo xakamaynta howlaha, iyo waxay u isticmaashaa nidaamka kumbuyuutarrada si ay u taageerto adeegyada ay ku bixiso madal. Qulqulka tamarta badan SCADA waa “nidaamka dareenka” ee IEMS. Iyada oo ku saleysan Internetka Tamarta, waxay aruurineysaa xogta socodka tamarta badan (sambalka celceliska: korantadu waxay ku jirtaa heerka labaad, iyo kuleylka / qaboojinta / hawadu waxay ku jirtaa heerka labaad ama daqiiqaddii) si loo dhammeeyo hawsha kormeerka ee u dhigma. Oo u keen xogta qiyaasaha gobolka iyo cutubyada shaqada ee horumarsan ee ku xigta, hel tilmaamaha kontoroolka hawlgalka nidaamka, oo u dir qalabka nidaamka si loogu fuliyo iyada oo loo marayo calaamadaha kontaroolka fog / aaladaha hagaajinta fog. Qulqulka firfircoonida socodka tamarta ee tirada badan waxaa ka mid ah qeybinta qulqulka tamarta, xarkaha saldhigga garoonka, howlaha nidaamka, korjoogteyn dhameystiran, macluumaadka howlgalka, falanqeynta iyo qiimeynta, iyo qalabka digniinta caqliga leh.
Qiyaasta gobolka tamarta badan leh. Sababtoo ah qaybinta ballaaran ee cabbirrada dhibco ee shabakadda dareeraha tamarta badan, noocyada kala duwan ee cabbiraadda, tayada xogta hoose, adkaanta dayactirka, iyo dareenka qiimaha sare, waxaa lama huraan ah in xog aruurin dhameystiran iyo khaladaad ay dhici doonaan. . Sidaa darteed, shabakadda socodka tamarta badan ayaa u baahan tikniyoolajiyadda qiyaasta gobolka si ay u bixiso wakhtiga-dhabta ah, isku-hallaynta ah, joogto ah oo dhammaystiran oo leh shabakad-qaran, kaas oo aasaaska u ah qiimaynta iyo go'aan-gaadhista IEMS. Qiyaasta gobolka tamarta badan leh waxay soo gabagabeyn kartaa cabbiraadda xogta waxayna baabi'in kartaa xogta xun, si xogta xun loo qiyaasi karo, la ogaan karo, loona aqoonsan karo, ugu dambeyntiina ay yareyn karto tirada rakibaadda dareemayaasha, yareyn karto isku xirnaanta shabakadda isgaarsiinta, isla markaana yareyn karto maalgashiga iyo qiimaha shebekada dareemayaasha. Saamaynta kharashaadka dayactirka waxay sare u qaadeysaa isku hallaynta qiimeynta iyo go'aan sameynta iyadoo la wanaajinayo isku haleynta macluumaadka aasaasiga ah, waxayna yareyneysaa halista shilalka howlaha tamarta.
Qiimeynta amniga tamarta tamarta badan iyo xakameynta. Muhiimadda nabadgelyadu waa is-muujin, iyo badbaadada nidaamka tamarta waxay si gaar ah ula xiriirtaa amniga nolosha iyo hantida. Dhinac, waxaa lagama maarmaan ah in la dhiso fikradda "N-1 er መስፈinta amniga. Fikraddan ayaa ah in fiiro gaar ah la yeelo isku xirka ugu liita isla markaana sameyso qorshe. Tusaale waxaa lagu soo qaatay shirka jaraa'id ee guulaha aan saaka gaadhay. Waxaa la sheegay in koronto weyn oo dhowaan ka dhacday Taiwan ay sabab u ahayd guuldarro ka dhashay gaaska. Markaa baalkaas ayaa ah xiriiri daciif ah nidaamka tamarta isku xidhka gaaska. Sidaa daraadeed, waa inaan had iyo jeer fiiro gaar ah la leenahay xiriiriyeyaasha daciifka ah, waana inay jirtaa qorshe loogu talagalay dhibaatooyinka, haddii kale waxaan wajaheynaa qatar weyn. Dhanka kale, waxaa lagama maarmaan ah in fiiro gaar ah loo yeesho kontoroolka amniga ee albaabka xawaaladda. Qoondaynta awoodda iyo qiimaha hawlgalka ee irridda baarkadu waa arrin muhiim ah. Dhinac, awoodda weyn, qiimaha sare ee maalgashiga ee isbeddelka, iyo dhinaca kale, awoodda baaxadda leh, khidmadda awoodda oo ay ku dallacday shirkadda ugu weyn. Tusaale ahaan, wadarta qiimaha maalgashiga iyo hawlgalka awoodda 50 MW iyo 100 MW awoodda ayaa aad u kala duwan. Haddii loogu talagalay inay tahay 50 MW awoodi, badaliyaha waa la gubi doonaa hadii ay awoodiisa dhabta ahi dhaafto. Sida loo xakameeyo qulqulka albaabka 50 megawatts waa dhibaatada xakamaynta amniga. Nidaamka socodka tamarta badan, nidaamyada kala duwan ee tamarta ayaa iskugu jira oo saameeya midba midka kale. Qayb ka mid ah ciladaha iyo jahwareerka ayaa saameyn ku yeelan doona qeybaha kale ee nidaamka socodka tamarta badan, oo sababi kara ficil silsilad ah, sidaa darteed loo baahan yahay falanqeyn iskuxiran. Waxaad u isticmaali kartaa dabacsanaanta ay ku siisay firfircoonaanta kuleylka, gaaska iyo nidaamyada kale si aad u siiso dariiqooyin cusub oo loogu talagalay xakameynta amniga nidaamyada korantada. Waxaad u adeegsan kartaa qaababkan cusub si aad u sameyso kontoroolka amniga.
Jadwalka kobcinta tamarta tamarta badan. Halkan waxaa ku yaal dhowr fikradood oo muhiim ah: qorshe-joojinta-bilowga, jadwalka maalin-ka-maalin, jadwalka maalin-maalin-ka-maalin, iyo xakamaynta waqtiga-dhabta ah. Baarkinka ama qeybinta sedex geesoodka ah ee magaalada, qeybta gaaska, iyo kuleylka korantada ayaa la bilaabi karaa oo la joojin karaa. Qalabka qaar waa la joojin karaa si loo yareeyo kharashaadka. Tan waxaa lagu bilaabi karaa oo loo joojin karaa iyadoo loo eegayo bilowga ugu habboon iyo qorshaha joojin la go'aamiyay maalmo ka hor. Ka dib isku hagaaji inta soo saariddu ku saleysan tahay bilowga iyo joogsiga, tani waa jadwalka maalin-maalin-ka-maalin. Kala dirista maalinlaha ah waxaa sabab u ah isbeddelada soosaarta korantada dabeysha iyo isbadalada culeyska, marka waxaa lagama maarmaan ah in dib loo jadwaleeyo maalinta gudaheeda si loo waafajiyo waxsoosaarka korantada cusub ee ku habboon oo la ilaaliyo isku dheelitirka ugu habboon ee ka soo baxa iyo rarka. Ugu dambeyntii, markii heerka labaad la gaaro, xakameyn ayaa loo baahan yahay. Si loo sugo amniga shabakadda, xakamaynta korantada, iyo ku-celinta jeermiga, xakamaynta waqtiga-dhabta ah ayaa loo baahan yahay. Waqtiga jadwalka jadwalka waa ka dheer yahay, guud ahaan cutubyada 15 daqiiqo, kontarooladuna waa ilbidhiqsiyo, cabirka waqtigaana wuu ka gaabanyahay. Nidaamka socodka tamarta badan, waxaa jira habab badan oo la xakamayn karo marka loo eego nidaamka tamarta hal. Marka laga eego aragtida keydka grid keydka, jadwalka dhameystiran iyo xakameynta qaboojinta, kuleylka, gaaska, iyo korantada ayaa lagu gaari karaa.
Qiimaha tamarta ee wadooyinka tamarta badan. Beeraha ama magaalada caqliga lihi waa inay tixgeliyaan dhisida qaab ganacsi oo aad u wanaagsan. Qaabka ganacsiga gudaha ma ahan mid dibadda ah, mana ahan dusha sare, laakiin wuxuu ku shaqeeyaa baarkinka. Muxuu u eg yahay nooca ganacsiga noocaas ahi? Moodeelka ugu cilmiga badan waa moodada qiimaha noode. Qaabka qiimaha tamarta 'noode' wuxuu marka hore u baahan yahay in la xisaabiyo si loo go'aamiyo qiimaha isticmaalka tamarta meelo kala duwan. Qiimaha isticmaalka tamarta wuxuu ka kooban yahay afar qaybood: mid waa qiimaha ka baxa tamar; tan labaadna waa qiimaha luminta gudbinta; saddexaad waa qiimaha isku-xirnaanta shabakadda; afar Waa qarashka isku xidhka tamarta badan. Markaa waa lagama maarmaan in si cilmiyaysan oo sax ah loo xisaabiyo qiimaha tamarta ee sanqad kasta, oo ay ku jiraan qiimaha qabow, kuleylka, gaaska iyo korantada, iyo qiimaha waqtiyada iyo goobaha kala duwan. Kaliya xisaabinta saxda ah ayaa wadarta tamarta beerta si weyn hoos loogu dhigi karaa, sababta oo ah Waxaad u adeegsan kartaa calaamadaha qiimaha si aad ugu hagto isticmaaleyaasha isticmaalka tamar. Sidan, qiimaha tamarta ee xadiiqadda oo dhan waxaa si weyn hoos loogu dhigi karaa qiimaha tamarta dabacsan.
Qiimaha tamarta sanka waxaa loo dejiyey iyadoo loo eegayo soosaarka alaabada alaab-qeybiyaha ee soosaarka. Marka xariiqda la xayiro, qiimaha qeyba walba wuxuu soo bandhigayaa qiimo kala duwan sida ku xusan goobta. Qiimaha-waqtiga dhabta ah wuxuu kicin karaa dabacsanaanta dhinaca isticmaalaha. Qiimaha tamarta 'nood' wuxuu ka turjumayaa qiimaha saynis ahaan, kaas oo ku habboon in la dhiso aalad suuq gudaha ah oo caddaalad ah.
Awooda tamarta badan ee qulqulaha warshad koronto. Warshadda korantada dalwaddu waxay tusaale u tahay suuqa sare. Beerta oo dhan ama magaalada waxaa loo rogi karaa warshad koronto oo weyn. In kasta oo aysan ahayn warshad koronto awoodeed, hadana waxaa jira ilo badan oo awood qeybin sida kaydinta tamarta iyo kuleylka iskujira, qaboojinta, iyo awooda. Waxaa galay xiddig suuq weyn oo isku habeyn kara. Awoodda yar iyo tirada badan ee kheyraadka la qaybiyey awgeed, way adag tahay in si gaar ah loo maareeyo suuqa. Iyada oo loo marayo soo aruurinta dhirta korantada dalwaddu, kheyraadka badan ee la qaybiyay ayaa la iskudarin karaa laguna wanaajin karaa iyada oo loo marayo naqshadeynta software si ay u bixiso xiirashada ugu sarreysa, isbeddelada soo noqnoqda, sharciyeynta korantada iyo adeegyada kale ee suuqyada dibedda. Dhiirrigelinta qoondaynta habboon iyo ka faa'iideysiga kheyraadka guud. Qaabka noocan ah ee ganacsigu wuxuu keeni karaa faa'iidooyin dhaqaale oo sarreeya, oo dhab ka noqday Mareykanka.
Iyada oo ku saleysan u fidinta u fidinta korantada, warshaddii korantada dalwaddu waxay iskugeyn kartaa koronto qaybinta, culeyska la xakamayn karo iyo aaladaha keydinta tamarta ee beerta loo yaqaan 'set kontolable set', si beertu ay uga qeybqaadan karto howlaha iyo kala diritaanka korantada heerka sare sida. dhan. Warshadda korantada dalwaddu waxay isku dubaridaa is-afgaranwaaga u dhexeeya korantada heersare ah iyo kheyraadka la qaybiyey, waxay si buuxda uga faa'iideysaneysaa qiimaha iyo faa'iidooyinka ay qeybsiga kheyraadka u keenayaan awoodda korantada iyo adeegsadayaasha, waxayna gartaan is-dhexgalka saaxiibtinimo ee korantada awoodda.
Jaantuskan soo socdaa wuxuu muujinayaa naqshadda dhismaha ee warshad tamarta tamarta badan leh
Labadaba, waa kaydinta shaybaarka isha. Dhinaca isha waxaa ka mid ah qalabka korantada caadiga ah, cutubyada CHP, kuleyliyeyaasha gaaska iyo qalab kale, iyo sidoo kale korantada korantada dibadda iyo marinka tamarta dib loo cusbooneysiin karo; grid-ka ayaa loo qaybiyaa qabow iyo kuleyl iyo nidaamyada kale ee gudbinta; dhinaca Dutch waa korantada, kuleylka iyo culeyska qabowga gudaha beerta Marka laga hadlayo kaydinta tamarta, noocyada kala duwan ee tamarta ayaa leh qalabkooda kaydinta tamarta. Jihada dheer ee korantada, gaaska, kuleylka, iyo qabowga tamarta badan ayaa midba midka kale dhameystira. Nidaamyada tamarta ee kala duwan waxaa lagu matalaa midabbo kaladuwan, iyo qalab kala beddelasho tamarta (matoorrada kuleylka, CHP, kuleyliyeyaasha gaaska, unugyada loo yaqaan 'lithium bromide unit') lammaaneyaal tamar kala duwan. Foomamka tamarta ee kaladuwan ee beerta ayaa la isku daraa oo loogu shaqeeyaa qaab dhirta awoodda korantada ah. Saldhigga hubinta bixinta korantada, kuleylka iyo qaboojinta xamuulka, isticmaalka tamarta hoose ee tamarta ayaa la rumeeysan yahay, waxtarka tamarta ayaa la hagaajiyaa, qiimaha tamarta ayaa la yareeyay. Iyo xoogga tamarta dib loo cusbooneysiin karo, nidaamka tamarta isku dhafan ayaa leh dabacsanaan badan, taas oo kor u qaadeysa aqbalaadda tamarta la cusboonaysiin karo oo sii horumarin doonta dhaqaalaha nidaamka.
Dacwada dalabka IEMS
Mashruuca Bandhigga Tamarta ee “Internet +” ee Tamarta Tamarta (Tamarta Internetka) ee laga hirgaliyay Chengdu Hi-tech West District. Aagga Farsamada Sare ee Chengdu West waa garoon warshadeed oo qiyaastii 40 kilomitir oo laba jibaaran ah. Nidaamka IEMS wuxuu falanqeynayaa saadinta iyo baahida tamar dhameystiran halkan si loo gaaro kobcinta iskaashiga tamarta badan. Adoo diiradda saaraya baahida tamarta sida korontada, gaaska, qaboojinta, iyo kuleylka, dhismaha barta internetka ee tamarta laga soo bandhigo oo ku saleysan xarun tamarta nadiifka ah (saadka gaaska dabiiciga ah iyo kuleylka isku darka, sawirada, tamarta dabeysha, iwm.) Waxay noqon doontaa waxaa lagu fuliyay si loo gaaro gaaska dabiiciga ah iyo tamarta tamar-dhuleedka ee aagga galbeed ee farsamada casriga ah, Dabaysha iyo tamarta qorraxda, uumiga, biyaha qabow, biyaha kulul, korontada iyo maareynta tamarta kale.
Nidaamka maaraynta tamarta guud ee Guangzhou Conghua R&D iyo mashruuca bandhig. Qeybta ugu weyn ee baarkani waa qiyaastii 12 kiiloomitir oo laba jibbaaran sidoo kale waa beero warshadeed oo caadi ah. Qaabka tamarta beerta warshadaha waxaa lagu gartaa awood ballaaran, qulqulka tamarta badan, iyo gelinta sare. Waxay leedahay shuruudo aasaasi ah oo wanaagsan oo ku saabsan iskaashiga tamar badan iyo tamar badan oo tamar badan. Waxay aad ugu habboon tahay muujinta "Internetka" moodalka tamarta isku-dhafan ee tamarta adeegga ganacsiga. Aag. Dhisida nidaamka IEMS beerta dhexdeeda, soojeediso warshad awood dalwad leh iyo qaabka jawaab celinta adeegsigu u baahan yahay, ku hirgal tikniyoolajiyada xakamaynta isku-xirka cluster, iyo ugu dambeyn nidaamku wuxuu gartaa codsiyada hawlgalka.
Mashruuca R&D ee nidaamka xakameynta tamarta smart Tamarta ee Lisha Island, Dongguan, Guangdong. Jasiiradda Dongguan Lisha sidoo kale waa garoon warshadeed oo qiyaastii ah 12 kiiloomitir oo laba jibbaaran. Nidaamka tamarta ee caqliga leh ee Lisha Island ayaa loo qaybiyaa afarta heerar soosocda: marka hore, qawaaniinta tamarta ee beerta hoostiisa ee iskujirta kulkulul; midda labaad, waxaa jira caqabado marka siyaasaddu aan loo baahnayn in si madax-bannaan loo maareeyo Maareynta Awoodaha tamarta ee Beerta; saddexaad, maaraynta tamarta gobolka oo leh siyaasad si buuxda loo sharciyeeyey; afraad, isdhaxgal (macaamil ganacsi) udhexeeya mustaqbalka iyo nidaamka weyn si loo abuuro shirkad koronto isku dhafan. Daraasadda iyo horumarinta nidaamka maaraynta tamarta waxay u qaybsantaa afar marxaladood: marka hore, guud ahaan waa mid aad u badan oo qayb ahaan la xakamayn karo; labaad, guud ahaan waa la xakamayn karaa oo qayb ahaan la hagaajiyaa; saddexaad, kobcinta guud iyo qayb ka mid noqoshada; afraad, wada shaqeynta guud iyo kobcinta wadajirka.
Gobolka tamarta badan ee tamarta qulqulka maareynta tamarta dhameystiran iyo mashruuca baarista habeynta. Saamiga unugyada korantada kuleylka ee Gobolka Jilin waa weyn yihiin, mana jiraan koronto kaydiya dabacsan sida bamgareynta iyo gaaska. Jilin waxay ku taal aag qabow. Xilliga kuleylka xilliga qaboobaha waa ilaa nus sano. Inka badan 90% oo ka mid ah unugyada awooda kuleylka waa unugyo kuleyl. Xilliga kuleylka, soosaarka ugu yar ee tamarta kuleylku ka badan yahay Heerka ugu yar ee gobolka, cadaadiska weyn ee nuugista dabaysha, iyo dhibaatada ka tagista dabaysha ayaa aad u daran. Sababta ugu weyni waa xidhiidhka kontaroolka kuleylka korantada ee qaybta kuleylka iyo “hagaajinta korantada kuleylka” habka si weyn hoos u dhigeyso awooda xiirashada ugu sarreysa waxayna ku mashquulsan tahay meesha dabeysha dabaysha. Sida loo adeegsado suuqa macnaheedu waa in la kicinayo kantaroolka iyo ka ganacsiga qulqulka tamarta badan waa dhibaatada ugu adag. Sababtaas awgeed, nidaamka IEMS waxaa loo diray si uu u barto habka suuqaynta ganacsiga ee nidaamka isku dhafan tamarta badan, darsado waxtarka qiimaha badan ee ciyaartooyda suuqa, iyo daraasadda intaa waxaa dheer, jawaabta kale ee tamar-qaadashada tamarta ee aagga banaanbaxa waxaa loogu talagalay , iyo tamarta isku-dhafan ee isku-dhafka maaraynta tamarta isku-dhafan ee tamar-soo-saareyaasha ayaa la soo jeediyay in lagu xalliyo dhibaatada isticmaalka awoodda dabayl-baaxadda weyn leh inta la gaarayo kuleylka nadiifka ah.
Inta lagu gudajiro nidaamka tamarta internetka laga bilaabo “fikradda” ilaa “soo dejinta”, waxaa wali jira fikrado badan oo cusub, teknolojiyad cusub, dalabyo cusub, kuwaas oo lagu xallin doono lagana wadaagi doono mustaqbalka, iyagoo rajeynaya inay caawiyaan qof walba shaqadiisa iyo waxbarashadiisa.
Battery Lithium Batteriga, Xidhmada Aaladda Batroolka Lithium, Xidhmada Aaladda Batteriga, Unugyada Baytariyada Lithium Ion, 3.6v Bathiil Lithium-Ion, Batroolka 20ah Lithium Ion,